घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » हवाई ताजा समाचार » Hawaii Omicron केस अब पत्ता लाग्यो
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • हवाई ताजा समाचार • स्वास्थ्य समाचार • HITA • अतिथि सत्कार उद्योग • समाचार • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
हवाईमा पहिले COVID-19 भएको व्यक्तिले ओमिक्रोन संस्करणको लागि सकारात्मक परीक्षण गरेको छ। यो व्यक्तिलाई कहिल्यै खोप लगाइएको थिएन र यात्राको कुनै इतिहास छैन।
Hawai'i स्वास्थ्य विभाग (DOH) राज्य प्रयोगशाला डिभिजन (SLD) ले SARS-CoV-2 भेरियन्ट B.1.1.529, जसलाई Omicron भेरियन्ट पनि भनिन्छ, टापुहरूमा फेला परेको पुष्टि गर्दछ।
"यो आतंकको कारण होइन, तर यो चिन्ताको कारण हो। यो एक रिमाइन्डर हो कि महामारी जारी छ। हामीले खोप लगाएर, मास्क लगाएर, सकेसम्म दुरी कायम गरेर र ठूलो भीडबाट बच्न आफूलाई जोगाउन आवश्यक छ," FACEP स्वास्थ्य निर्देशक डा एलिजाबेथ चारले भने।
सोमबार डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी सर्भिसेस, Inc. (DLS) ले एक आणविक संकेतको साथ एउटा नमूना पहिचान गर्‍यो जसले यो ओमिक्रोन हुन सक्छ। राज्य प्रयोगशाला डिभिजनले द्रुत सम्पूर्ण जीनोम अनुक्रमण प्रदर्शन गर्यो र आज नमूना निर्धारण गर्यो। Omicron संस्करण.
COVID-19 सकारात्मक व्यक्ति मध्यम लक्षणहरू भएको O'ahu निवासी हो जसलाई पहिले COVID-19 बाट संक्रमित भएको थियो, तर कहिल्यै खोप लगाइएको थिएन।
यो समुदाय फैलिएको मामला हो। व्यक्तिको यात्राको कुनै इतिहास छैन।
Omicron भेरियन्ट कम्तिमा 23 देश र कम्तिमा दुई अन्य राज्यहरूमा पत्ता लागेको छ।
“महामारीभरि, DOH को राज्य प्रयोगशाला COVID-19 जीनोमिक अनुक्रम सञ्चालन गर्न एक अग्रणी रहेको छ, जसरी ओमिक्रोन भेरियन्ट पहिचान गरियो। हाम्रो निगरानी प्रणाली काम गरिरहेको छ। यो घोषणाले विशेष गरी छुट्टीको मौसममा आफू र हाम्रा प्रियजनहरूलाई जोगाउन अत्यन्तै होसियार हुनको लागि अनुस्मारकको रूपमा काम गर्दछ, ”राज्यको महामारी विशेषज्ञ डा. सारा केम्बलेले भने।
"डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी सर्भिसेस, Inc. (DLS) ले महामारीको सुरुवातदेखि नै स्वास्थ्य विभागसँग नजिकबाट काम गरेको छ," डा. क्रिस व्हेलेन, माइक्रोबायोलोजी र मोलिक्युलर डायग्नोस्टिक्सका उपाध्यक्ष र प्राविधिक निर्देशकले भने। "जब हामीले स्पाइक जीन ड्रप-आउट पत्ता लगायौं, जुन एक आणविक संकेत हो कि भाइरस ओमिक्रोन भेरियन्ट हुन सक्छ, हामीले तुरुन्तै DOH राज्य प्रयोगशालाहरूमा रिपोर्ट गर्‍यौं र तिनीहरूलाई अनुक्रमको लागि नमूना पठायौं।"
DOH बाट केस अन्वेषकले सम्पर्क गरेको जो कोहीलाई कृपया COVID-19 को प्रसारण सुस्त बनाउन प्रयासमा सहयोग गर्न भनिएको छ। लक्षणहरू भएका जो कोहीलाई परीक्षण गर्न र अन्य व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गर्न भनिन्छ। कोभिड-१९ पोजिटिभ व्यक्तिहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा आएका खोप नदिइएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गराउन सल्लाह दिइन्छ।
निःशुल्क परीक्षण र भ्याक्सिन बारे जानकारी छ यहाँ उपलब्ध.